CHOOSING THE RIGHT MILK – Pediasure
သင့်ကလေးအာဟာရအတွက် ရွေးချယ်ရလွယ်ကူစေရန် အောက်တွင် အကြံပြုချက်တစ်ချို့ပေးထားပါသည်။
သင့်ကလေးကို ကလေးအထူးကုဆရာဝန်နှင့် ပြောဆိုပြသခြင်းသည် ကလေး၏အကောင်းဆုံး ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက် လိုအပ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဆရာဝန်က သင့်ကလေးအစားစားခြင်း အလေ့အထများ၊ လှုပ်ရှာမှုများ၊ ဆေးကုသထားမှု မှတ်တမ်းများနှင့် သင့်ကလေးကြီးထွားမှုအတိုင်းအတာများစတဲ့ မေးခွန်းများစွာ မေးလိမ့်မည်။ ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် သင့်ကလေး၏ နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်လိမ့်မည်။
သင်ကလေးကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အရသာကို သင်သိတယ်ဆိုရင် ကလေးအတွက် အာဟာရဖြည့်စွက်စာ ရွေးချယ်ရာတွင် ကောင်းကျိုး တစ်ချက်ဖြစ်စေနိုင်သည်ကို သင်သိပါသလား? သင့်ကလေး၏ အကြိုက်အရသာကိုသိရှိဖို့ အရေးကြီးပါသည်။ Pediasure ကို ဗီနီလာနှင့် စတော်ဘယ်ရီ အရသာနှစ်မျိုးဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ အရသာစမ်းသပ်သောက်သုံးစေခြင်းသည် သင့်ကလေး၏ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရသာပေါ်အခြေခံပြီး မှန်ကန်သော အာဟာရဓာတ်များရရှိနိုင်သည်။
ကလေးများသည် ကြီးပြင်းလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့တွင် အာဟာရလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ သင်ဝယ်ယူခြင်းမပြုမီ ထုတ်ပိုးမှုပေါ်တွင်ရှိသော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို သေချာစွာဖတ်ပါ။ သင့်ကလေးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထောက်ပံ့ပေးရန် မှန်ကန်‌သောအာဟာရ၊ မှန်ကန်သောပမာဏ ရရှိရန် လိုအပ်သည်။ Pediasure သည် ကလေးများ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးရန်အတွက် ပြည့်စုံမျှတသော အာဟာရဖြည့်စွက်စာ ဖြစ်သည်။
အကယ်၍သင့်ကလေးသည်အစားဂျီးများသူဖြစ်ရင်၎င်းသည် နေ့စဉ်လိုအပ်သော အာဟာရပြည့်ဝစွာ ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ပြီးပြည့်စုံသည့် ဖြည့်စွက်စာမှာ ပရိုတင်း၊ ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်နှင့် အခြားအာဟာများပေါင်းစပ်ပါဝင်ရမည်။1 ကုန်ပစ္စည်း၏ ကျောဘက်တွင် ပါဝင်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အသေးစိတ်စစ်ဆေးပါ။ 2
နောက်ဆုံးသင် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ ဆိုပါစို့။ သင့်ရွေးချယ်မှုသည် သင့်ကလေးကြိုက်နှစ်သက်သော အရသာနှင့် ကလေးကြီးထွားမှုကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရမည်။ သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းသည် သင့်ကလေးအနာဂတ်အ‌ပေါ်သက်ရောက်မှု ရှိသည်။ မှန်ကန်တဲ့အာဟာရရွေးချယ်ခြင်းက အစပေါ့။ Pediasure သည် သိပ္ပံနည်းကျ ဖော်စပ်ထားပြီး သင့်ကလေးများကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထောက်ပံ့နိုင်သော အာဟာရဖြည့်စွက်စာ ဖြစ်သည်။ မှန်ကန်သောအာဟာရကသာလျှင် သင့်ကလေး အနာဂတ်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်သည်။
1. Food and Nutrition Research 2013. 57: 21836 – http://dx.doi.org/10.3402/fnr.v57i0.21836
2. Alarcon P et al. Pediatr.2003; 42: 209-217